မီလ်နာရဲ့ ထူးခြားတဲ့မှတ်တမ်းက တကယ့်ကို မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ
ဂုဏ်ယူစရာ မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ မီလ်နာ Milner
21 Aug 2018 . 5:17 PM
လီဗာပူးလ်အသင်း ကွင်းလယ်လူ မီလ်နာ Milner ဟာ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲအပြီးမှာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အဲဒါကတော့ မီလ်နာ ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတိုင်း သူ့အသင်းက ရှုံးပွဲမရှိဘဲ အဲဒီမှတ်တမ်းက (၄၈)ပွဲအထိ ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ လိဒ်စ်အသင်းနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲဦးထွက်ကစားခဲ့တဲ့ မီလ်နာဟာ နောက်တစ်လအကြာ ဆန်းဒါးလန်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ လိဒ်စ်အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး အဲဒီတုန်းက သူ့အသက်ဟာ (၁၆)နှစ်၊ (၃၄၆)ရက်သာရှိသေးလို့ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းတစ်လျှောက် အသက်အငယ်ဆုံး ဂိုးသွင်းသူအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ နယူးကာဆယ်၊ အက်စတွန်ဗီလာ၊ မန်စီးတီးအသင်းတွေဆီ ပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ပြီး မီလ်နာရဲ့ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ပြိုင်ပွဲစုံ သွင်းဂိုးအများဆုံးရာသီက ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီက အက်စတွန်ဗီလာအသင်းအတွက် (၁၂)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ လီဗာပူးလ်အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့အချိန်က စလို့ အခုအချိန်အထိ အသင်းအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် (၁၃)ဂိုးသွင်းယူထားပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတော့ တစ်ဂိုးမှ မသွင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အသက်(၃၂)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မီလ်နာဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် (၄၈)ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး သူဂိုးသွင်းတဲ့ပွဲတွေမှာ (၃၈)ပွဲနိုင်၊ (၁၀)ပွဲသရေကျခဲ့တာကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် စံချိန်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်ကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း မီလ်နာဟာ ပယ်နယ်တီကနေ ဒီရာသီ သူ့အတွက် ပထမဆုံးလိဂ်ဂိုးကို သွင်းယူခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် လီဗာပူးလ်ပရိသတ်တွေဟာ မီလ်နာ နောက်ထပ် ဂိုးတွေ ဆက်သွင်းဖို့ မျှော်လင့်နေလောက်ပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီရာသီမှာ လီဗာပူးလ်အသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆု ရရှိဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတာကြောင့် မီလ်နာရဲ့ အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ မှတ်တမ်းက လီဗာပူးလ်အသင်း ချန်ပီယံမျှော်လင့်ချက်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မလားဆိုပြီး မျှော်လင့်နေကြလို့ပါပဲ။
Photo:The Sun,The Independent,Ghanasoccernet,Football Whispers
ဂုဏျယူစရာ မှတျတမျးကောငျးတဈခုကို ပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ မီလျနာ Milner
လီဗာပူးလျအသငျး ကှငျးလယျလူ မီလျနာ Milner ဟာ ခရစ်စတယျပဲလစျေ့နဲ့ပှဲအပွီးမှာ ဂုဏျယူစရာကောငျးတဲ့ ပိုငျဆိုငျနိုငျခဲ့ပါပွီ။ အဲဒါကတော့ မီလျနာ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲတိုငျး သူ့အသငျးက ရှုံးပှဲမရှိဘဲ အဲဒီမှတျတမျးက (၄၈)ပှဲအထိ ရှိလာပွီဖွဈပါတယျ။ ၂၀၀၂ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလမှာ လိဒျဈအသငျးနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲဦးထှကျကစားခဲ့တဲ့ မီလျနာဟာ နောကျတဈလအကွာ ဆနျးဒါးလနျးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ လိဒျဈအသငျးအတှကျ ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး အဲဒီတုနျးက သူ့အသကျဟာ (၁၆)နှဈ၊ (၃၄၆)ရကျသာရှိသေးလို့ ပရီးမီးယားလိဂျ သမိုငျးတဈလြှောကျ အသကျအငယျဆုံး ဂိုးသှငျးသူအဖွဈ စံခြိနျတငျခဲ့တယျ။
အဲဒီနောကျမှာတော့ နယူးကာဆယျ၊ အကျစတှနျဗီလာ၊ မနျစီးတီးအသငျးတှဆေီ ပွောငျးရှကေ့စားခဲ့ပွီး မီလျနာရဲ့ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ပွိုငျပှဲစုံ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးရာသီက ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီက အကျစတှနျဗီလာအသငျးအတှကျ (၁၂)ဂိုးသှငျးယူခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ လီဗာပူးလျအသငျးဆီ ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့အခြိနျက စလို့ အခုအခြိနျအထိ အသငျးအတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျ (၁၃)ဂိုးသှငျးယူထားပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီကတော့ တဈဂိုးမှ မသှငျးနိုငျခဲ့ပါဘူး။
အသကျ(၃၂)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ မီလျနာဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ (၄၈)ပှဲမှာ ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပွီး သူဂိုးသှငျးတဲ့ပှဲတှမှော (၃၈)ပှဲနိုငျ၊ (၁၀)ပှဲသရကေခြဲ့တာကွောငျ့ ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ စံခြိနျတဈခုလညျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ခရစ်စတယျပဲလစျေ့ကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာလညျး မီလျနာဟာ ပယျနယျတီကနေ ဒီရာသီ သူ့အတှကျ ပထမဆုံးလိဂျဂိုးကို သှငျးယူခဲ့တယျ။ အခုဆိုရငျ လီဗာပူးလျပရိသတျတှဟော မီလျနာ နောကျထပျ ဂိုးတှေ ဆကျသှငျးဖို့ မြှျောလငျ့နလေောကျပါပွီ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဒီရာသီမှာ လီဗာပူးလျအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆု ရရှိဖို့ ပဈမှတျထားနတောကွောငျ့ မီလျနာရဲ့ အံ့အားသငျ့စရာကောငျးတဲ့ မှတျတမျးက လီဗာပူးလျအသငျး ခနျြပီယံမြှျောလငျ့ခကျြအတှကျ အထောကျအကူဖွဈမလားဆိုပွီး မြှျောလငျ့နကွေလို့ပါပဲ။
by Ko Kyue . 23 mins ago